I-bumble bee jasper meaning - Isibuyekezo esisha 2021 - Ividiyo enhle
I-bumblebee jasper noma i-bumble bee stone echazayo nezinzuzo zokuphulukisa i-crystal. Itshe lejaspi le-bumble bee livame ukusetshenziselwa ubucwebe njengendandatho, ubuhlalu, amacici, elengayo, umgexo, futhi futhi njengolukhuni.
Thenga izinyosi zemvelo eziyindilinga esitolo sethu
Njengalo mbala wewolintshi onombala ogqamile, ophuzi, nomnyama empeleni wakhiwa ngenhlanganisela yodaka lwentaba-mlilo yase-Indonesia nasentanjeni. Idwala elicebile nge-carbonate laqala ukutholwa esiqhingini sase Java phakathi nawo-1990. Izinto zithambile, ngobulukhuni be-Mohs obungu-5 noma ngezansi. Kulula ukusika nokupholisha leli dwala elineminyango. Sivame ukugcwalisa umgodi nge-resin ye-Opticon.
I-bumble bee jasper (noma iBumblebee) empeleni iyinhlanganisela yezintaba-mlilo, i-anhydrite, i-hematite, isulfure, i-arsenic, njll. Kunempikiswano enkulu ngokuthi ngabe ijaspi leqiniso noma i-agate, njengoba abanye bekubize kanjalo. Amaphethini athandekayo kuleli tshe avame ukulingisa umbala otholakala kuma-bumblebees, yingakho igama. Umbala ophuzi ubangelwa ukutholakala kwesibabule, okunobuthi, njenge-arsenic, ngakho-ke kufanele unakekelwe - hlamba izandla zakho njalo ngemuva kokuphatha.
i-bumble bee jasper ayilona neze itshe lejaspi
Umbala ophuzi uvela kokuqukethwe okuphezulu kwesulfure
Hhayi jaspi ngempela
Yiziphi izinto zokuphulukisa ze-bumblebee jasper?
Yini i-bumble bee Jasper eyenziwe ngayo?
Ingabe i-bumble bee jasper ayivamile?
Ingabe i-bumble bee Jasper idayiwe?
I-bumblebee ayilona neze itshe lejaspi kepha igama linamathele ngezizathu ezahlukahlukene. Umbala waletshe le-Bumblebee uqhamuka enhlanganisweni yamaminerali nodaba lwentaba-mlilo. Ukuhlanganisa i-anhydrite, i-hematite, isulfure, ne-arsenic kanye nezinye izinto, i-jasper bumblebee empeleni iyitshe le-agate. Amaphethini ahlukile futhi aqinisekisa ukuthi awekho amatshe amabili afana ncamashi, okwenza i-bumble bee jasper ibe yitshe elithandekayo elizofakwa kunoma yikuphi ukuhlelwa kobucwebe.
Imibala ephuzi etholakala etsheni ivela kokuqukethwe okuphezulu kwesibabule. Ngaphandle kobuhle baleli tshe, kungcono ukugeza izandla ngemuva kokuphatha leli tshe. Isibabule singaba yingozi empilweni yakho. Kungcono ukujabulela leli tshe elikude noma ubucwebe obukhethekile obukuvikela ekuvezweni.
Ukuvela kwetshe kubukeka njengejaspi elingayixazululi inkinga yalo yokuqamba igama. Kuyitshe elimangalisayo futhi kuyisengezo esingakholeki kunoma yikuphi ukuqoqwa kobucwebe, noma ngabe kusetsheni elibunjiwe noma ekhumbini. Sisebenzisa leli tshe ukuhlobisa amabhizinisi namahhovisi.
Itshe elinamandla lomhlaba. Ifaka ngaphakathi kuwo amandla aqinile wentaba-mlilo eyayivela kuwo.
Itshe elingajwayelekile. Kwakhiwa lapho intaba-mlilo yavula khona emhlabeni. Lawa matshe ashukumisa womabili ama-phras ne-solar plexus chakras.
I-solxus ye-solar ibuye ibe yi-chakra yamandla, futhi ngokuvuselela le ndawo ingavumela ukukhula ngamandla akho siqu.
I-solxus ye-solar ibuye ihlobene ngokuqinile nokuzazisa. Lawa matshe ayaziwa ukuthi asiza ngokwanda kokuzibonga.
Incazelo ye-bumblebee jasper ikhuthaza injabulo ephelele nenjabulo. Ikhuthaza ukugujwa kwezikhathi ezincane zokuphila. Ukukhuthaza ukwethembeka, ikakhulukazi kuwe, kukusiza ukufeza amaphupho akho.
I-Bumble Bee Jasper, evela e-Indonesia video
Ikunika amandla. Ikhuthaza injabulo ephelele. Ikhuthaza ukugujwa kwezikhathi ezincane zokuphila. Ikhuthaza ukwethembeka, ikakhulukazi kuwe. Ikusiza ufeze amaphupho akho. Izithelo zivimbe amandla emzimbeni. Kuvusa umsebenzi wengqondo. Kwehlisa izimpawu komzimba.
Igama lokuhweba. Igama lokuhweba nge-calcite enemibala enemibala etholakala eMount Papandayan, eNtshonalanga Java, e-Indonesia. Okwenziwe kwenziwa nge-calcite ekhuliswe ngokukhululekile ngebhande elihlukile eliphuzi, elisawolintshi nelomnyama.
I-bumblebee crystal i-crystal engavamile kakhulu equkethe i-gypsum, isulfure ne-hematite. Kunzima futhi kuyingozi ukukuthola ngoba imayini itholakala ngaphakathi kwentaba-mlilo esebenzayo e-Indonesia.
Akudayiwe. Umbala ophuzi kungenxa yokuba khona kwesibabule
Yemvelo bumble bee jasper ukudayiswa in gem esitolo sethu
Senza ubucwebe bezinyosi zejaspi ezenziwe ngokwezifiso njengezindandatho zokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
I-bumble bee jasper 12.89 ct
I-bumble bee jasper 15.47 ct
I-bumble bee jasper 13.25 ct
I-bumble bee jasper 14.26 ct
I-bumble bee jasper 12.82 ct
I-bumble bee jasper 11.44 ct
I-bumble bee jasper 15.25 ct